ऐना हेर्दा ~ brazesh
July 31, 2011 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
बायाँ फन्को ६४
कुनै समयमा बाँकी संसारसंग नजोडिएको र विकासले नछोएको एउटा गाउँ थियो । त्यहाँका मानिसहरु आदिम युगमै भने जसो गरी बाँच्दथे । त्यो गाउँकाहरु पानीका लागि समेत धेरै टाढाको खोलामा पुग्नुपथ्र्यो । त्यो खोलामा जहिले पनि धमिलो पानी मात्र बग्थ्यो । त्यसैले त्यहाँका मानिसलाई सङ्लो पानी कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन । त्यही भएर त्यहाँका मानिसहरुले आफ्नो अनुहार देख्न पाएका थिएनन् । एक दिन दिशा हराएको एउटा हवाइजहाज त्यो गाउँको माथिबाट जाँदा कुनै कारणवश जहाजबाट ऐनाको एउटा टुक्रा त्यहाँ खस्यो । गाउँको एउटा मान्छेले त्यो भेट्यो । कौतुहलतावश त्यो टिपेर ओल्टाइपल्टाइ हेर्दा उसले त्यसमा आफ्नै अनुहार देख्यो । तर ऐना भनेको के हो भन्ने नै थाहा नपाएको त्यो मान्छेलाई आफ्नो अनुहार कस्तो छ भन्ने थाहा नहुनु कुनै अस्वाभाविक कुरो थिएन । उसले आफूलाई चिन्न सकेन । उसलाई त्यो आफ्नो मरिसकेका बाबु हुन् भन्ने लाग्यो । कसैलाई केही नभनी घरमा उसले त्यो ऐनालाई लुकाएर राख्यो । रातिराति सबै सुतेपछि लुकाएको ठाउँबाट ऊ त्यो निकालेर नियालेर हेथ्र्यो । एक दिन उसकी श्रीमतीले त्यो चाल पाई । आफ्नो लोग्ने आधारातमा लुसुक्क उठेर के हेर्छ भन्ने उसलाई कौतुहलता भयो । भोलिपल्ट लोग्ने काममा गएपछि उसले लुकाएको ठाउँबाट ऐना निकालेर हेरी । त्यसमा एउटी स्वास्नीमान्छेको अनुहार देखेपछि उसले सोची,
“आजकल उसलाई मोहनी लगाउने बोक्सी यही पो रहिछ ।”
ऐना भएर पनि के गर्नु, मान्छेले आफूलाई नचिनेपछि, आफ्नो अनुहार कस्तो छ भन्ने थाहा नपाएपछि यस्तो भ्रम हुनु स्वाभाविक हो । तर हामी त विकसित समाजमा बाँच्ने मान्छेहरु हौं । हामीलाई आफ्नो अनुहारको बारेमा कुनै भ्रम छैन । हरेक दिन आफूलाई हामीले ऐनामा हेरेका हुन्छौं । हामीसंग आफ्ना तसवीरहरु हुन्छन्, आजकल त भिडियो पनि हुन्छ । अर्थात हामीले आफूलाई हरेक कोणबाट, हरेक अवस्थामा नियाल्न पाएका हुन्छौं । तर, के यति हुँदाहुँदै पनि हामीले आफूलाई चिनेका छौं त ? हामी सबैमा आफ्ना बारे केही न केही भ्रमहरु पालेर बसेका छौं आजका चेतनशील मान्छेहरु पनि । हामी अरुले त्यही गरुन् भन्ने अपेक्षा गर्छौं, जुन हामीलाई मन पर्छ, ठीक लाग्छ । हामी अरुले त्यही बोलेको सुन्न चाहन्छौं, जुन हामीलाई राम्रो लाग्छ । त्यसो भएन भने हामीलाई त्यो सह्य हुँदैन । हामी आफू कस्ता छौं भन्ने कुरा आफैले निर्धारण गरेर बसेका हुन्छौं । अरुले त्यसको विपरित केही पनि भनेको मान्दैनौं । हामी त्यो नहुन पनि सक्छौं, जे हामीले ठान्छौं । अरुले भनेको कुरालाई पनि बहिलेकहीं मनन गर्न जान्नुपर्छ हैन र मासनसले ? मानिसले ऐना हेरेर आफ्नो अनुहार त चिन्छ तर आफूलाई चिनेकै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन ।
हामी विद्यालयमा गुरुहरुबाट, घरमा ठूलाबडाहरुबाट एकथोक पढ्दै, सुन्दै र सिक्दै हुर्कन्छौं तर व्यावहारिक जीवनमा प्रवेश गरेपछि ती सिकेका सबै कुरा त्यहाँ काम नलाग्ने रहेछ भनेर बुझ्दै जान्छौं । एउटा सानो उदाहरण हो, साँचो बोल्नू । स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत् । तर के व्यावहारिक जीवनमा स्पष्ट वक्ता सुखी रहन सम्भव छ ? किन छैन भने हरेक मानिसलाई भ्रम प्यारो हुन्छ । त्यही मानवीय कमजोरीका कारण संसारमा ठूलाठूला तानाशाहहरुको उदय भयो र पतन पनि । तानाशाहहरु भनेका राजनीति र शासनमा मात्र हुँदैनन् । समाजका हरेक क्षेत्रमा हुन्छन् । घरमा आफूले भनेको बाहेक अरु कुरा स्वीकार्य नहुने घरमूली पारीवारिक तानाशाह हो । साहित्यमा आफूले लेखेका मात्रै उत्तम र त्यससंग सहमत नहुनेहरु मूर्ख हुन् भन्दै हुर्मत लिन खोज्ने मान्छे साहित्यिक तानाशाह हो । कार्यालयमा आफ्नो कमी कमजोरी स्वीकार्न नसक्ने हाकिम प्रशासकीय तानाशाह हो । अर्थात् हाम्रो समाज तानाशाहहरुले भरिएको समाज हो । हामी सबैमा त्यो कमजोरी धेरथोर मात्रामा रहेको हुन्छ । त्यसैले त परिवारमा, समाजमा, मित्रमण्डलीमा र कार्यालयमा, यो संसारमै कहीं पनि हामी स्पष्टवक्ता हुन सक्दैनौं ।
कुनै पनि क्षेत्रमा किन नहोस्, लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी भएर बसेकाहरुलाई यदि अर्को मान्छेले झुक्केर पनि ऐना देखाइदियो भने त्यो उसलाई स्वीकार्य हुँदैन । यहाँ नेर हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, जसले हाम्रो भूल औंल्याइदिन्छ, त्यो हाम्रो शुभचिन्तक हो । किन भने भूल नगर्ने मान्छे संसारमा हुँदैन । त्यो स्वीकार्न सक्यौं भने मात्र हामी त्यसलाई सुधार्न सक्छौं र कम भूल गर्ने मान्छे बन्न सक्छौं । हाम्रा हरेक जायज नाजायज कुरामा वाहवाह गर्नेहरु क्षणिक रुपमा बढी प्यारा लाग्छन् तर कालान्तरमा तिनले हामीलाई भँडखालोमा जाकिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु नै चेतनशील मान्छे बन्नु हो । कमी कमजोरी भनेको मर्यादा पुरुष भनिएका भगवान राम देखि लिएर गौतम बुद्धमा समेत थिए र आलोचना भनेको तिनको पनि भएको थियो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि किन मानिस आफूलाई सर्वगुणसम्पन्न भएको भ्रान्ति पालेर बाँच्छ ? हुन त मान्छे भएपछि आफूलाई आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट देखाउने मोह कसलाई हुँदैन र । यो त मानवीय गुण हो । यो गुण त्यतिबेला दुर्गुण बन्न पुग्छ जब हामी त्यसका लागि अरुलाई निकृष्ट बनाउन खोज्छौं, देखाउन खोज्छौं । आफ्नो उँचाइ कायम गर्ने दुइवटा उपाय हुन्छन् । पहिलो अरुलाई आफूभन्दा तल खँगार्न खोज्ने अनि दोश्रो आफू अरु भन्दा माथि उठ्न खोज्ने । एउटा भनाइ छ, थरिथरिका मान्छेहरु मिलेर संसार बन्छ ।
अर्को पटक ऐना हेर्दाखेरि हामीले आफूलाई नियालेर हे¥यौं भने, आफूलाई ढाँट्ने प्रयत्न गरेनौं भने हामी ती दुइथरि मध्ये कस्तो मान्छे बनेर आफ्नो विशिष्टता खोज्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न अवश्य पनि सघाउ पुग्नेछ ।